विप्लवबारे कांग्रेसको कडा स्वर: सीकेसँगको सहमति कस्तो एन्टिबायोटिक, यसले रोगको अन्त्य गर्छ कि रोगीको? :: PahiloPost
विप्लवबारे कांग्रेसको कडा स्वर: सीकेसँगको सहमति कस्तो एन्टिबायोटिक, यसले रोगको अन्त्य गर्छ कि रोगीको?
13th March 2019, 04:45 pm | २९ फागुन २०७५
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसले पार्टी मुख्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी सीके राउतसँग सहमतिबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। ११ बुँदे सहमतिको विरोधमा ५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले सीके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौता राष्ट्रघाती भएको जनाएको छ।
कांग्रेसको प्रमलाई प्रश्न- संविधान संशोधनको त्यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती की जनमत संग्रहको यो सम्झौता राष्ट्रघाती?
पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, 'सीकेसँगको सहमति १ बुँदा स्वागतयोग्य तर दोस्रो बुँदा गम्भीर छ। जनमतसंग्रह बुझिने गरी भएको सम्झौतामा गम्भीर विमति छ।'
शान्ति सम्झौताको १२ बुँदे सम्झाउँदै प्रवक्ता शर्माले ११ बुँदेको दुई नम्बर बुँदाबारे साझा व्याख्या चाहिएको बताएका छन्। 'बुँदा २ को साझा व्याख्या चाहियो दुबै तर्फबाट। एउटा एन्टिबायोटिक बनेको छ। जसको दुबैथरीले आआफ्नो तर्फबाट प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले रोगीको अन्त्य हुने हो कि रोगको?'
१२ बुँदे सम्झौतामा सरकार र माओवादीले समान धारणा राखेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न सकिने बाटो भएको उल्लेख गरे। भने, 'कुनै पनि विमति संविधानबमोजिम समाधान गर्न सकिन्छ। यो भनेको संविधान संशोधन हो। संशोधनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा प्रस्ताव लगेका थिए। त्यसलाई ओलीले राष्ट्र घाती भने। सीकेसँगको सहमतिमा संविधान संशोधनको कुरै छैन।'
विप्लवबारेको निर्णय शासकीय नेतृत्वको अभाव
पत्रकार सम्मेलन सीके राउतसँगको सम्झौतामा केन्द्रित भए पनि सञ्चारकर्मीले भने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई सरकारले लगाएको प्रतिबन्धबारे केन्द्रित भएका थिए। विप्लवबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता शर्माले निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएको दल भएको बताए।
त्यसैगरी शर्माले आफ्नो गोत्र(कम्युनिस्ट) बन्धुसँग शान्तिपूर्ण ढंगले कदम चाल्नुपर्नेमा प्रतिबन्धको बाटो रोज्दा शासकीय नेतृत्वको अभाव देखाएको तर्क गरे। भने, 'हिजोको निर्णयबाट प्रष्ट हुन्छ, शासकीय नेतृत्वको अभाव देखियो। गोत्रबन्धुसँग शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधानको बाटोमा जाओस।'
विप्लवबारे कांग्रेसको कडा स्वर: सीकेसँगको सहमति कस्तो एन्टिबायोटिक, यसले रोगको अन्त्य गर्छ कि रोगीको? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।